Madaxweynaha Somaliland oo la kulmay wasiiro katirsan Xukuumadda Soomaaliya.
MUQDISHO(P-TIMES) – Madaxweynaha Somaliland Muuse Cabdi Cabdi oo uu wehliyo wasiirkiisa arrimaha gudaha Maxamed Kaahin, kuna sugan magaalada barakeysan ee Maka Al Mukarama ayaa la kulmay xubno katirsan golaha wasiiradda ee dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Wasiiraddan la kulmay Madaxweyne Biixi, waxaa ka mid ah wasiirka Arrimaha dibada Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, Wasiirka Maaliyadda ee dawladda Faderaalka Cabdiraxmaan Ducaale Beyleh iyo xubno kale.
Sawir wadajir ah oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa lagu sheegay in ay Madaxweynaha Somaliland salaan ugu tageen xubnaha golaha wasiiradda oo laftirkoodu ka mid ahaa xujeyda sannadkan ee acmaasha xajka soo gudanayay.
Madaxweynaha Somaliland ayaa marar badan ku dhaliilay xisbiga ay iska soo horjeedaan ee WADANI in afkaartiisu tahay midnimada Soomaaliya, sidaas oo kalena dad badan oo tagay magaalada Muqdisho, sawirana lasoo galay Madaxda dawladda Faderaalka ayaa la xiray.
Talaabada Muuse Biixi ula kulmay wasiiraddan ayaa kamid ah arrimaha maanta ugu hadal-heynta badan magaalada Hargeysa ee Somaliland, waxaana dadku ay is weydiinayaan waxay ku kala gedisan yihiin arrimahan Madaxweyne Biixi sameeyey iyo talaabooyinkii horey loogu xiray dhalinyaradda qaarkood.